Ogaden News Agency (ONA) – Kulan dastuurka Soomaaliya looga hadlaayo oo Muqdisho lagu soo geba-gebeeyey
Kulan dastuurka Soomaaliya looga hadlaayo oo Muqdisho lagu soo geba-gebeeyey
Posted by Daljir	/ April 26, 2016
Guddiga dib-u-eegista Dastuurka Federaalka Soomaaliya ayaa shalay soo gebagebeeyey kulan maalintii shalay ka furmey magaalada Muqdisho, kaas oo looga hadlaayey dib u eeegista dastuurka. Kulanka ayaa loo qabtey Bulshada rayidka ah si ay uga qayb-qaataan dib u eegista dastuurka isla markaana aragtidooda ugu biiriyaan
Kulanka waxaa ka soo qayb-galay Wasiirka Dastuurka Federaalka Soomaaliya Xuseen Maxamuud Xuseen iyo Guddoomiyaha Guddiga Madaxa banaan ee dib u eegista Dastuurka Maxaed Daahir Afrax.
Guddoomiyaha Guddiga dib-u-eegista Dastuurka qabyada ah Maxamed Daahir Afrax ayaa ka hadley kulanka waxaana uu bulshada ku dhiiriyey in ay aragtidooda soo gudbiyaan, waxaana uu yiri:
“…Fikradu waa adinka, annagana waxaa nahay farsamo-yanaadii, waxaad noo soo gudbisaan ayaan ka shaqayn doona, marka waa in aad aragti wanaagsan soo gudbisaan, taasna waxa ay horseedi doonta in bulshadu ay hadhoow marka ay codeynayaan ay howshu fududaato….”
Waxyaabaha sida weyn looga doodey ayaa ah maqaamka caasimadda Soomaaliya yeelan doonto.
Shirkan ayaa ka hordhacaya shirka lagu heshiiyey ee dib loogu eegayo Dastuurka ee ka dhacaya caasimadda Puntland ee Garoowe bartamaha bisha May.
Madaxweyne iyo Madaxweyne ku-xigeen Soomaaliya ma yeelan kartaa?
Warar soo baxay ayaa sheegaya in guudiga dib-u-eegistu ay Garoowe la tegi doonaan in dalka laga dhigo Madaxweyne iyo Madaxweyne ku-xigeen halka uu markii hore ahaa Madaxweyne iyo raysalwasaare, waxaana la is-weydiinayaa sida fikirkaas u socon karo.